अलैंची बिक्रीका तयारी
LSUK Life Members & Ordinary Members
LSUK Shyora Update
Late Mani Ram Gurung Shoyra Expired Date
Join LSUK Member
AGM & Committee Meeting Points
LSUK Members update Jun 2018
Patron & ADVISOR
Lamjunge Thado Bhaka
Lamjung Samaj UK Bhet Ghat
Shiva Ratri Mela Karaputar
Lamjung Samaj UK 10th Anniversary 25 Nov 2017
Summer Bhet Ghat Photos
Lamjung Samaj UK Summer BBQ on Saturday 18 June 2016
Lamjung Samaj UK Summer Bhet Ghat 20 Jun 15
LSUK Summer Bhet Ghat 26 Jul 2014
Lamjung Samaj UK Summer Bhet Ghat On Sat 15 July 2017
Winter Bhet Ghat Photos
LSUK Winter Bhet Ghat Photo Gallery on 22 Nov 2014
Lamjung Saanjh Saturday 7th November 2015
Lamjung Samaj UK Winter Party Sat 19 Nov 2016
AGM Meeting Photos
LSUK 8TH AGM Reading 25 April 2015
Lamjung Samaj UK 9th AGM and 4th Election 23 April 2016
Lamjung Samaj Aama Samuaha Ramailo Saanjh 18 Feb 2017
Nepali Mela London
Lamjung Samaj UK Nepali Mela 2015
Nepali Mela London on Sunday 28 Aug 2016
Lamjung Samaj UK Nepali Mela London Aug 2017
Ilam Pokhari Samaj
Lamjung Samaj UK Community House Proposal
LAMJUNG BHAWAN (HOUSE) DONORS NAME LIST
LSUK Ama Group
You are here: HomeNewsअलैंची बिक्रीका तयारी
डा. अमिता गुरुङ्ग र डा. रोबिन गुरुङ्ग
सुश्री जसिता गुरुङ
डा मेरिना गुरुङ र डा शिशिर गुरुङ
हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ! एकेन्द्र गुरुङ
हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ब्यक्त गर्दछ Bijayaa grg
अलैंची बिक्रीका लागि पठाउने तयारीसहित गुणस्तरको तह (ग्रेडिङ) छुट्याइँदै लमजुङका कृषक । तस्बिर : आश गुरुङ/कान्तिपुरचैत्र २०, २०७३- यहाँ अलैंचीको उत्पादन बढेको छ भने अलैंची व्यवसायी महासंघले पहिलोपटक व्यापार चिह्न ‘ट्रेडमार्क’ प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
लमजुङ र ताप्लेजुङ, पाँचथर, झापा, इलाम, धनकुटा, दोलखा, रोल्पा, तनहुँ, कास्की, गोरखा, धादिङलगायत ४५ जिल्लामा अलैंची खेती हुन्छ । यसबाट ४० लाखले प्रत्यक्ष फाइदा लिइरहेका छन् । वार्षिक कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ बढीको अलैंची भारत निर्यात हुने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा उत्पादित अलैंची अब आफ्नै ट्रेडमार्कमार्फत तेस्रो मुलुक पठाउने तयारी व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन् । अलैंचीको भण्डारण र सुकाउने तरिका परम्परागत भएकाले केही ठाउँका अलैंचीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको व्यवसायी बताउँछन् ।
महासंघका नवीनकुमार बर्माका अनुसार अलैंची ‘एभरेस्ट बिग कार्डमम’ को ट्रेडमार्कको नाममा दर्ता भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ताको प्रक्रियामा छ । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र पहिलोपटक यूएई, पाकिस्तान र बंगलादेशमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।
व्यवसायीका अनुसार पुच्छर नकाटिएको, आधा भाग नसुकेको, कलिलो टिपेर सुकाएको, चुरुम्फा (वन अलैंची) मिसिएको अलैंचीले गुणस्तर खस्केको छ । गत वर्ष ४ हजार टन अलैंची उत्पादन भएकोमा यस वर्ष बढेर ५ हजार टन पुगेको छ ।
नेपालमा विसं १८३० मा भारतबाट बिरुवा ल्याएर इलामका पहलमान महतले अलैंची खेती थालेका थिए । दुई शताब्दीसम्म नेपाली किसानले कायम गरेको गुणस्तरको जस अहिलेसम्म भारतले लिँदै आएको छ । ‘हाम्रो अलैंचीलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ,’ अलैंची व्यवसायी महासंघ जिल्ला शाखा पाँचथरका अध्यक्ष खेम अधिकारीले भने, ‘हामीले राम्रो बनाएर पठाउने । भारतमा गएपछि उनीहरूको अलैंचीसँग मिसाउने गर्दोरहेछ । राम्रो भए आफू जस लिने, नराम्रो भए नेपालबाट आएको भनेर लगाइदिँदोरहेछ ।’ जिल्ला शाखा लमजुङका अध्यक्ष अजय तामाङले अलैंचीको गुणस्तर कायम गर्न जिल्लामा अभियान सुरु भएको बताए ।
जिल्लाको साविक ३६ गाविसमा यस वर्ष करिब ८ सय ५० क्विन्टल अलैंची उत्पादन भएको थियो । गत वर्ष २८ गाविसमा ६ सय २० क्विन्टल उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष अलैंची बिक्रीबाट किसानले १० करोड ६७ लाख ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । गत वर्ष १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए । उनका अनुसार अलैंची उत्पादन बढेकोमा यस वर्ष मूल्य घटेको छ । उनले अलैंचीको गुणस्तर कायम गराउन कृषकको घरदैलोमै पुगेर सचेतना प्रशिक्षण दिइरहेको बताए । अलैंचीको गुणस्तर सुधार्न अलैंचीमा ‘पुल्ठो’ लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको उनले बताए । ‘भट्टीमा सुकाएको अलैंची पुच्छार नझरेमा मट्टीटेल, पेट्रोल, ग्यास बालेर पुच्छार जलाउने कार्यको प्रतिबन्ध लगाएको छौं,’ उनले भने ।